अनौठो गाउँ जहाँ एउटा रुखका कारण मानिसदेखि पशुपन्छीसमेत छन् अन्धो - sailungonline
अनौठो गाउँ जहाँ एउटा रुखका कारण मानिसदेखि पशुपन्छीसमेत छन् अन्धो
६ असार २०७६, शुक्रबार ०८:२५ । काठमाडाैं
भारतको एउटा गाउँ ‘टिल्टेपक’का सबै मानिसहरू अन्धो छन् । उक्त गाउँमा बस्दै आएका जोपोटेक जनजातीका मानिसहरू वास्तबमा जन्मदेखि नै अन्धो भने हुँदैनन् । तर, उमेर बढेसँगै बिस्तारै उनीहरुले आँखाको ज्योति गुमेको थाहा पाउँछन् । यो के कारणले भएको छ कसैलाई पनि थाहा छैन । यस गाउँमा अन्य थुप्रै रहस्यहरू भेटिन्छन् ।
एउटा रुखलाई मानिन्छ अन्धोपनको कारण एउटा रुखलाई मान्दै आएका छन् । उक्त गाउँमा भएको ‘लावजुएजा’ को रुखलाई हेर्दाहेर्दै अन्धो भएको उनीहरू बताउँछन् । गाउँलेले अन्धोपनको कारण रुखलाई भनेपनि वैज्ञानिकले उक्त गाउँमा भएको अन्धोपनको कारण झिँगा भएको पत्ता लगाएका छन् । झिँगाले मानिसलाई टोकेपछि त्यसको सीधा असर आँखामा पर्ने भएकाले बिस्तारै आँखामा असर पर्दै गएर उनीहरुले आँखाको ज्योति गुमाउँछन् ।
अजब-गजब व्यवहार देखाउँछन् मानिसहरू
उक्त गाउँमा रहने मानिसहरुको व्यवहार अजब-गजब हुन्छन् । मानिसहरू कोदो र खुर्सानी खाने गर्छन् । उनीहरू कोदो त खानाको लागि खाने गर्छन् तर त्यससँगै सुख्खा खुर्सानी किन खान्छन् कसैलाई थाहा छैन । यस गाउँमा जम्मा ७० वटा झुपडीरहेको छ । तर, कुनै पनि झुपडीमा झ्याल छैन ।
मानिसहरू मात्र होइनन् उक्त गाउँमा पशु-पन्छी पनि अन्धा छन् । यो गाउँमा पन्छिहरू उडेको देख्न पाइदैन किनकि चरा उड्न खोजेपछि कतै ठक्कर खाएर खस्छन् र धेरै बाँच्दैनन् पनि ।
यहाँका मानिसहरू रातमा खाना खाएपछि मदिराको सेवन गर्छन् । त्यहाँका मानिसहरुलाई आफूहरू अन्धो भएकोमा कुनै पछुतो वा दुख छैन । त्यहाँका मानिसहरू काठबाट बनेको हतियार प्रयोग गरेर आफ्नो रक्षा गर्ने गर्छन् ।
विश्वमा आजः फुटबल बादशाह पेलेको जन्मदेखि जाँ पाल सात्रद्वारा नोबेल पुरस्कार अस्वीकार
‘विश्वकै सबैभन्दा ठूलो’ गुलाबी हिरा रूसबाट विक्री गरिने
श्रीमतीसँग परपुरूषको सहवासमा श्रीमानको सहयोग
जहाँ विधवा महिलाले परपुरुषसँग यौन सम्बन्ध राख्नैपर्छ
बिकिनी लगाउँदा खोसियो मेडिकल लाइसेन्स
१. शिक्षिका मृत फेला परेपछि खोटाङमा एमालेको वडा अधिवेशन स्थगित
२. इंग्लिस प्रिमियर लिगमा सिटीको सहज जित
३. खोटाङमा कुकुरको टोकाईबाट १५ जना घाइते
४. खोटाङ प्रहरीले यात्रुसँग बढी लिइएको भाडा फिर्ता गरायो
५. चेल्सीसँग ७-०गोल अन्तरले नर्विच सिटी पराजित, माउन्टको ह्याट्रिक
६. विमलले मछिन्द्र क्लबबाट ए डिभिजन लिग खेल्ने